ငါးခန်းခြောက်စက် - Twesix
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ ငါးခန်းခြောက်စက်.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် Twesix.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် Twesix.
ဤထုတ်ကုန်သည်စွမ်းဆောင်ရည် / စျေးနှုန်းအချိုးအစားအရယှဉ်ပြိုင်ထားသောထုတ်ကုန်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။.
စွမ်းအင်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်ငါးအခြောက်ခံစက်ကိုတရုတ် DPPG150s-X Tsix မှကယ်တင်ခြင်း
လျှပ်စစ်ငါးအခြောက်ခံစက်သည်ရိုးရာငါးခြောက်စက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စွမ်းအင်ကိုသက်သာစေသည်။ ခြောက်သွေ့သောအချိန်၏ insulation ကိုလှောင်ပြောင်သောစက်ကိရိယာများသည်ပူပြင်းသည့်စက်သည်လေပူကိုခြောက်သွေ့စေနိုင်သည်။ တစ်နာရီလျှင် 29-35 ကီလိုဂရမ်အခြောက်ခံစက်သည်တစ်နာရီလျှင် 29-35 ကီလိုဂရမ်ကိုသုံးနိုင်သည်။Dehumidifier - ဖြည်းဖြည်းခြောက်သွေ့နေစဉ်အတွင်းငါးမှအစိုဓာတ်ကိုဖမ်းယူသောအထူးခြောက်သွေ့သောလုပ်ငန်းစဉ်ပါ0င်သည်။ Twsix ငါးခြောက်စက်သည်သင်၏ area ရိယာကိုလျော့နည်းစေပြီးအေးစက်စေရန်နှင့်စိုထိုင်းဆကိုလေအေးနှင့် 10% လျှော့ချနိုင်ပြီးငါးကြီးငယ်ငါးခြောက်အဘို့အကြီးလှ၏။အပူပြန်လည်ထူထောင်ရေး: ထုတ်ကုန်ထဲမှာမိတ်ဆက်ပေးသည်။ 1. ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုမှု - 1. ငါး 2. ငါးအသားတင် 3. Squid 4. Crab55နိမ့်သောအပူချိန် - သင်၏ငါးခြောက်သွေ့ရန်ယခုနှစ်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ Twsix ငါးခြောက်စက်သည်အပူချိန်နိမ့်ခြင်းဖြင့်သင်၏ငါးကိုအမြန်ဆုံးခြောက်သွေ့စွာခြောက်သွေ့စေနိုင်သည်။ Twsix ငါးခြောက်စက်သည်သင်၏ငါး၏အရသာနှင့်အာဟာရတန်ဖိုးကိုထိန်းသိမ်းရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အပူချိန်ခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့မှုသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန် features များ - Twsix အခြောက်ခံစက်သည်တစ်လက်ကျန်သောငါးခြောက်စက်ဖြစ်သည်။
Tsix အပူစုပ်စက်အခြောက်ခံစက်သည်အပူချိန်မြင့်မားရန်အပူစုပ်စက်ဖြစ်သည်။ compressor သည်အပူကိုမြင့်မားစေသည်။ နှင့်မြင့်မားသောဖိအားဓာတ်ငွေ့မြင့်မားသောအပူစွမ်းအင်ကိုထုတ်လွှတ်နှင့်အခါဖြတ်သန်းအရည်ဖြစ်လာသည်ပန်ကာပြေးနေတဲ့ condenser,ဤအပူစွမ်းအင်သည်ခြောက်သွေ့ခန်းတွင်လေထုအပူချိန်ကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများ၏အတွင်းပိုင်းရေကိုခြောက်သွေ့စေမည့်ရေသည်လေပူပြင်းသည့်ရေနွေးငွေ့ဖြစ်လာသည်။ကုန်ပစ္စည်းများကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခြင်းဖြင့်ကြိုးစားခဲ့လိမ့်မည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင်အပူပေးရန်အသုံးပြုသောစနစ်သည်အပြင်ဘက်မှ Refresh Air ကိုအပူပေးရန်အပူပေးစနစ်ရှိသည်, ၎င်းသည်လတ်ဆတ်သောလေထုကို 60% - 70% - 70% - 70% - 70% - 70% - 70% - 70% ။
ခွေးများအတွက်အကောင်းဆုံးအသားလူရှုပ်ခန်းမ - ခွေးများကိုခွေးများအတွက်အကောင်းဆုံးအသားများ --dphg050s-g
အမဲသားယေရှံသည်အမဲသား, ကြက်သားမှပြုလုပ်သောပရိုတင်းဝါးဝါးသည်, Tsix Jerky Dehydrator အားဖြင့်အမဲသားနှင့်ကြက်သားများသည်လေလံတွင်ပူပြင်းနေပြီးအပူချိန် 25 မှ 75 ဒီဂရီအထိဖြစ်သည်။ အမဲသား dehydrator ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အာဟာရများကိုထိန်းသိမ်းထားရုံသာမကဝမ်းဗိုက်သည်ဝါးနိုင်သည်။ ။Safer: အခြောက်ခံစက်သည်ဝက်သား, အမဲသား, ကြက်သားနှင့်ငါးများကဲ့သို့သောဝက်သား, အမဲသား, ကြက်သားနှင့်ငါးကဲ့သို့သောအသားရေစာများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ လှပတဲ့အသွင်အပြင်နဲ့ဒီ dehydrator ဟာအမဲသားလူရှုပ်နေတဲ့အသားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ချက်ပြုတ်ရန်လွယ်ကူပြီးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လုံခြုံသည်။အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း - ခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို PLC စစ်ဆင်ရေးမျက်နှာပြင်သို့သတ်မှတ်ခြင်း, အလိုအလျောက်မှတ်တိုင်သို့သတ်မှတ်ခြင်းစွမ်းအင်ချွေတာခြင်း - အစားအစာကိုကောင်းမွန်စွာအကာအကွယ်ပေးပြီး၎င်းကိုကြွယ်ဝသော, အရည်ရွှမ်းသောအရသာကိုပေးပါ။ Twsix Jerky dehydrator သည်အပူပူစက်ကိုအပူပေးရန်အပူပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ၎င်း၏စွမ်းအင်ချွေတာသည့်အင်္ဂါရပ်ဖြင့်သင်၏အသားမှအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကြွယ်ဝမှုကိုပြုလုပ်ရန်၎င်းကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ငါးအရေခွံခွေးသည် dehydator နှင့် dehumidifier dphg150s-x ကိုကုသသည်
ငါးအရေခွံများကိုရေခန်းခြောက်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်ရေခြောက်သွေ့သောငါးအရေခွံများ၌ငါးခြောက်များနှင့်အာဟာရများရှိသည့်ငါးအရေခွံများ၌ငါးခြောက်များ၌ငါးအရေခွံများ၌ကြွယ်ဝသောငါးအရေခွံများ၌ပါ0င်သည်။ ခွေးများအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကုသမှု, စက်သည်အပူ, ခြောက်သွေ့ခြင်း, အအေးနှင့်လူအချို့နှင့်လူအချို့တို့ကိုသာပိုင်ဆိုင်သည်မဟုတ်။ ဤ funtions များမရှိဘဲစက်သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်ကောင်းသောအားကောင်းသောဆက်ဆံမှုများကိုမသုံးနိုင်ပါ။Dehydrating နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံး: Twsix ခွေးသည် Dehydrator နှင့် dehumidifier သည်ခွေးတစ်ကောင်နှင့်မည်သူမဆိုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီစက်ဟာရေခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထိရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းတွင် BPA အခမဲ့ဖြစ်သောထူးခြားသောဒီဇိုင်းရှိသည်။ Twsix dehydroator နှင့် dehumidifier သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မိဘများအနေဖြင့်ဖြစ်ရမည်။ ၎င်းသည်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အကြိုက်ဆုံးရေခဲမုန့်များကိုရေခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာ fit ဖို့အလုံအလောက်ခရီးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။အသားများ, သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးမျိုးအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောဤအံ့သြဖွယ်ရာခန်းမနှင့် dehumidifier နှင့်အတူရေခဲသေတ္တာကိုနှုတ်ဆက်ပါ။ ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ - အသားများ, သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးမျိုးအတွက်အလွန်ကြီးစွာသော။အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ dehydrole ကို၎င်း၏အရာလုပ်ရန်စောင့်ပါ။ ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် - ဤ dehydroator နှင့် dehumidifier သည်သင်၏ခွေး၏အကြိုက်ဆုံးရန်ကုန်တွင်ကြာရှည်စေလိမ့်မည်။
SPORCHIX ကြက်သားအမဲသား dehydrator -dphg150s-g ထုတ်လုပ်သူများ
ခြောက်သွေ့သောအဆင့်တစ်ခု -ကြက်သားခြောက်သွေ့သောအခန်းထဲသို့ဝင်ပြီးနောက်ခြောက်သွေ့သောအပူချိန်ကို 60-65 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိထားပါ။ ခြောက်သွေ့သောအချိန်သည် 4-6 နာရီဖြစ်သည်။ ဒီအဆင့်မှာသိပ်မလိုအပ်ပါဘူး။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအသား၏အရောင်နှင့်အရသာကိုထိန်းချုပ်ရန်အပူချိန်မြင့်မားသောကစော်ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကစားရန်ဖြစ်သည်။ခြောက်သွေ့သောအဆင့် 2:ကြက်သားခြောက်သွေ့သောကြက်သည် 65 65 ℃တွင်ခြောက်သွေ့ပြီးနောက်ခြောက်သွေ့သောအပူချိန်ကိုခြောက်သွေ့သောအပူချိန်ကို 50 ~ 60 ℃နှင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ခြောက်သွေ့သောလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအပူပိုင်းခန်း၏စိုထိုင်းဆကိုခြောက်သွေ့သောအခြေအနေများအောက်တွင်ခြောက်သွေ့သောအပူရှိန်ကိုသေချာစေရန်စိုထိုင်းဆကိုထိန်းချုပ်ရန်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ကြက်သားခြောက်သွေ့သောကြက်သားခြောက်သွေ့ခြင်းကရေနံထုတ်လုပ်ခြင်းကိုသေချာစေရန်နှင့်အရေပြားသည်သဘာဝကျုံ့သွားစေနိုင်သည်။ ခြောက်သွေ့သောကြက်သားခြောက်သွေ့သောကြက်သားခြောက်သွေ့သောအချိန်သည်နာရီ 50 မှ 60 အထိရှိသည်။ ခြောက်သွေ့သောကြက်သားခြောက်သွေ့သောကြက်သားခြောက်သွေ့သောအချိန်သည်ဒေသအမျိုးမျိုးနှင့်မတူညီသောဖောက်သည်များ၌အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ခြောက်သွေ့သောကြက်သားခြောက်သွေ့သောအချိန်သည်အလွန်မြန်ဆန်သင့်သည်, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ခြောက်သွေ့ရန်အချိန်တိုအတွင်းလိုအပ်သည်။ အပူချိန်မြင့်တက်လာသောအခါခြောက်သွေ့သောကြက်သားသည်ယိုယွင်းပျက်စီးသွားပြီးရေနံပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်။ခြောက်သွေ့သောအဆင့်သုံးခု -ခြောက်သွေ့သောဘဲခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့သောအခြောက်သည် 50% မှ 60% ခြောက်သွေ့ပြီးခြောက်သွေ့သောဘဲခြောက်သွေ့သောဘဲသည်အနီရောင်မှအနီရောင်တောက်ပလာပြီးခြောက်သွေ့သောဘဲသည်အနည်းငယ်ကျုံ့သွားသည်။ ဤအဆင့်တွင်အေးသောလေကိုဆောင်းရာသီရာသီဥတုအခြေအနေများ, လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း, လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း, လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း, လေယာဉ်ခြောက်သွေ့မှု 5-10 နာရီခန့်ကြာအောင်ခြောက်သွေ့သောဘဲသန္ဓေသားသည်အရောင်တောက်ပသည်မဟုတ်ဘဲအ0တ်အထည်ဖြူပါ0င်သည်။ခြောက်သွေ့သောအဆင့်လေး:ခြောက်သွေ့သောကြက်သားခြောက်သွေ့သောကြက်သားသည်ကစော်ဖောက်ခြင်းကာလနှင့်ကျုံ့ချိန်ကာလကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်ထိန်းချုပ်မှုကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ နောက်ပိုင်းခြောက်သွေ့ခြောက်သွေ့သောအပူချိန်ကို 45 ~ 55 ℃ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ အပူ 30% ဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားပြီးခြောက်သွေ့သောအချိန်သည်3မှ5နာရီအထိရှိသည်။ စိုထိုင်းဆကို 12% မှ 16% အထိထိန်းချုပ်ထားသည်။ အောက်ပါဖုတ်နိုင်ပါတယ်။အသားခြောက်စက်သည်အသားထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုခြောက်သွေ့စေရန်သင့်တော်သည်။ ၎င်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ခြောက်သွေ့သောပတ်ဝန်းကျင်သည်သန့်ရှင်းရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာ0ပတ်0န်းကျင်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာရာသီဥတုကြောင့်မထိခိုက်ပါ။ ခြောက်သွေ့သောအပူချိန်ကို 5-75 ℃အကြားမတန်ရောက်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ အနိမ့်ခြောက်သွေ့သောစျေးနှုန်း, အရောင်နှင့်အသွင်အပြင်နှင့်ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုဘဝ။ ၎င်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, လုံခြုံမှု, စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း, စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အရည်အသွေးကောင်းသည့်အရည်အသွေးကောင်းများရှိသောခြောက်သွေ့သောပစ္စည်းကိရိယာအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
TSIX 1000kg တရုတ်စက်ရုံကြက်သွန်ဖြူခြောက်စက်စက်ကိုပူပြင်းသည့်လေအေးပေးစက် --DPHG150S-G
စက်ရုံစျေးနှုန်းတရုတ်ကြက်သွန်ဖြူပြုပြင်စက်, ကြက်သွန်ဖြူခြောက်သွေ့စက်။ ကြက်သွန်ဖြူခြောက်များကိုအမှုန့်အဖြစ်မပြုလုပ်မီ၊ လတ်ဆတ်သောကြက်သွန်ဖြူကို ဖြတ်၍ ကြက်သွန်ဖြူများကိုအခြောက်ခံစက်ထဲသို့ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောစက်ထဲသို့ထည့်ပါ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ကြက်သွန်ဖြူအခြောက်လှန်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စျေးနှုန်းများကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းအားကိုဆက်သွယ်ပါ
dehumidifier dphg150s-x နှင့်အတူအပူချိန်နိမ့်ပင်လယ်သခွားသီးခြောက်စက်
ပစ္စည်းဗန်းပေါ်ရှိပြုတ်သောပင်လယ်သခွားသီးကိုပစ္စည်းဗန်းပေါ်ရှိရေကူးခန်းခြောက်ခန်းထဲသို့ထည့်ပြီးအပူချိန်, စိုထိုင်းဆကိုအပူချိန်, စိုထိုင်းဆနှင့်အချိန် parameters တွေကိုထည့်သွင်းပါ။ အကယ်. ၎င်းသည်သာမန်ဆားခြောက်သွေ့သောပင်လယ်သခွားသီးဖြစ်လျှင်ခြောက်သွေ့သောအပူချိန်ကိုအနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည်။ အကယ်. ၎င်းသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောသို့မဟုတ်ရေခြောက်သွေ့သောပင်လယ်သခွားသီးများဖြစ်လျှင်လေယာဉ်သခွားသီးအအေးလေကြောင်းခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့သောအခြောက်လှန်းခြင်းစနစ်ကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားပါ။ နှင့်ပင်လယ်သခွားသီးအထူးရနံ့ရှိပါတယ်။ပင်လယ်တွင်ပါ0င်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်များပင်လယ်သခွားသီးကိုဖြတ်ပြီးအူကိုညှစ်ပါ။ ပင်လယ်သခွားသီးကိုသန့်ရှင်းသောရေဖြင့်ဆေးကြောပါ။ ဝမ်းဗိုက်မှပါးစပ်မှပါးစပ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးစင်တီမီတာကိုဖြတ်ပြီးကတ်ကြေးများဖြင့်ဖြတ်ပြီးအတွင်းပိုင်းကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်အူများကိုထုတ်ယူပါ။ အူမကိုမဖယ်ရှားပါကပင်လယ်သခွားသီးတစ်လုံးလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။စင်ကြယ်သောပင်လယ်သခွားသီး။ ပင်လယ်သခွားသီးများကိုသန့်ရှင်းရန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့်အတွင်းပိုင်းကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုထုတ်ယူပြီးနောက်ပင်လယ်သခွားသီးများကိုအကြိမ်ကြိမ်သန့်စင်ပြီးများသောအားဖြင့်သူတို့သန့်ရှင်းသည်အထိ5ကြိမ်သန့်စင်ကြသည်။ ရေနွေးငွေ့နှင့်ချက်ပြုတ်ပင်လယ်သခွားသီး။ ရေအပူချိန်သည် 90 ဒီဂရီရှိသည့်အခါသန့်ရှင်းသောပင်လယ်သခွားသီးကိုအိုးတစ်လုံးထဲထည့်ပြီးချက်ပြုတ်ပါ။ ဤအချိန်တွင်ပင်လယ်သခွားသီးလျှင်မြန်စွာကျုံ့သွားပြီးပင်လယ်သခွားသီးကျောရိုးများသည်သိသာထင်ရှားသည့်ပင်လယ်သခွားသီးများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ နာရီဝက်ခန့်အကြာတွင်ပင်လယ်သခွားသီးကိုထုတ်ယူပြီးသင့်လျော်သည့်အတိုင်းကြမ်းဆားများချမှတ်ပါ။
Tsix စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းသံပုရာခြောက်စက်သည်စက်ရုံဈေးနှုန်း -dphg150s-G ဖြင့်မီးဖို၌မိုးရေထွက်သောသံပုရာရည်
Lime Dryer သည်ခြောက်သွေ့သောအခန်း, ပန်ကာနံရံများ, fan wall dryer etc တပ်ဆင်ထားသည်။ အသီးခြောက်သွေ့သောစက်ကသံပုရာခြောက်သွေ့ရန်။ 2-3mm အထူအကြောင်းကိုသံပုရာ sticing ။ သံပုရာအချပ်များကိုအညီအမျှသို့လှည့်ပတ်ခြင်း, ဗန်းများကို Tsix Dehydrolator သို့ထည့်ပြီး targe အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆကိုသတ်မှတ်ခြင်းကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့် TAYS အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆကိုထည့်သွင်းထားသည်။
TSIX 500kg ဂျင်းခြောက်သွေ့စက်စီးပွားဖြစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြောက်သွေ့စက် -DPHG050S-G
ဂျင်းချပ်များကိုကြိတ်ခွဲခြင်းမပြုမီ၊ ဂျင်းကို ၂ သို့မဟုတ် ၃ မီလီမီတာအချပ်များခွဲလိုက်ပြီးနောက် TSIX သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြောက်သွေ့စက်မှခြောက်သွေ့စေရန် ၂ နာရီခန့်ကြာသည်။ ခြောက်ပြီးနောက်ဂျင်းခြောက်အိတ်များကိုအိတ်များသို့မဟုတ်ပုလင်းများထဲသို့လျင်မြန်စွာထုပ်ပါ။